Igwefoto azụ atọ nke Nokia 7.2 sitere na ZEISS | Gam akporosis
Ezigbo foto ahụ e mere na Nokia 7.2 gosipụtara na igwe azụ quad azụ ọ na-ebu sitere na ZEISS
Enwere ọtụtụ atụmanya gburugburu Nokia 7.2. A na-aga ịmalite ekwentị a, a na-atụkwa anya ọtụtụ ihe na ya, maka ihe ekpughere na mmepe ndị na-adịbeghị anya, nke anyị nwere ike ịchọpụta na ọ ga-ebupụta igwefoto azụ atọ na usoro okirikiri, yana ya n'ihu imewe na ndị ọzọ.
A na-atụ anya ka ngalaba foto nke ọnụ ọnụ a dị ezigbo mma, na nke a bụ ihe anyị ga - emesi obi ike, ọbụlagodi tupu mwepụta nke ọdụ ahụ ga - ewere ọnọdụ, ebe ọ bụ na ZEISS ga - arụ ya, ụdị ama anya anya ama ama nke rụkọrọ ọrụ na ụlọ ọrụ Finnish na mbụ.
Joachim Kuss, onye na-arụ ọrụ maka ZEISS, tweeted banyere ihe omume pịa. Na mgbakwunye, ọ gụnyere foto nke ekwentị ahụ, nke egosipụtara usoro ihe osise ama ama gburugburu, ya mere edobere ya ọzọ. Ọ bụ ezie na ehichapụla tweet ugbu a, ndị na-ekiri ya were nseta ihuenyo, ọ bụ nke anyị bi n'okpuru.
Nokia 7.2 ZEISS Triple Camera Kwadoro
Dịka ị pụrụ ịhụ ọzọ na ohere ọhụụ a, A na-etinye usoro ihe mmetụta igwefoto Nokia 7.2 n'ụlọ obibi dị okirikiri nke nwere ihe atọ na-akpata ya na ọkụ ọkụ ọkụ.. Edere ya site na akara ọcha ma bukwa akara ZEISS. Ọ na-apụta milimita ole na ole site na azụ azụ, ebe onye na-agụ akara mkpịsị aka nọ n'akụkụ ya, n'okpuru ya. N'ihi na nke ikpeazụ anyị maara na ihuenyo agaghị hotara na mbụ hotara biometric akpọchi.
Ngwaọrụ a ga-abịa na ole na ole nkọwapụta teknụzụ na njirimara dị n'etiti, nke gunyere Snapdragon 700 series mobile platform na ihuenyo karịrị 6 sentimita asatọ diagonal nwere obere obere waterdrop na mkpebi FullHD + nke akụkụ nke ebughibu, yana ihe ndị ọzọ. N'ime ya mmemme IFA nke afọ a, nke a ga-eme, anyị ga-emesị mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ezigbo foto ahụ e mere na Nokia 7.2 gosipụtara na igwe azụ quad azụ ọ na-ebu sitere na ZEISS
Osisi Osisi Osisi Go ugbu a na-akwado ọnọdụ gbara ọchịchịrị mgbe mmelite kachasị ọhụrụ